उपत्यका छिर्ने नाकामा पैदल यात्रीलाई समेत कडाइ ! - News20 Media
June 18, 2020 June 18, 2020 N20LeaveaComment on उपत्यका छिर्ने नाकामा पैदल यात्रीलाई समेत कडाइ !
काठमाडौं : असार १ गतेदेखि सरकारले उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरी दैनिक कामकाजमा सहजता अपनाएको छ । त्यसको प्रभाव भने उपत्यकाको सबै नाकामा परेको छ । लक डाउन खुकुलो भएको हल्लाले अत्याधिक सवारीसाधन उपत्यका छिर्न खोजिरहेका छन् तर प्रहरीले बिना पासका सवारीसाधन छिर्न नदिएको बताएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिम नाका नागढुङ्गा र पूर्वी नाका साँगामा उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधनमाथि चेक जाँच कडा पारिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कोरोना संक्रमित संख्या बढेपछि उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य ६ नाकामा कडाइ गरिएको हो । काठमाडौँ उपत्यका छिर्नेमध्ये बढी व्यस्त रहने नागढुङ्गा, फर्पिङ र साँगा नाकाबाट सवारीसाधन प्रवेशमा थप कडाइ गरिएको प्रहरीको दावी छ ।
पैदल यात्री प्रवेशमा समेत कडाइ गरिएकाले बिना पास कुनै पनि व्यक्ति नाकाबाट उपत्यका छिर्न नपाउने काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘पैदल याुत्रलाई फर्काइएको यकिन विवरण छैन,’ एसएसपी ज्ञवालीले भने, ‘कोही सवारी साधन तलतिरै रोकेर पैदल हिँडेर आउँछन्, तर त्यस्तो होइन, पैदलयात्रुलाई पनि फर्काइनेछ ।’
उनले अगाडि थपे, ‘कोही नेताहरुको फोन लिएर आउनुहुन्छ त कोही मन्त्रीको मान्छे हुँ भन्दै आउनुहुन्छ ।तर बिना पासका कसैलाई पनि काठमाडौँ उपत्यका छिर्न दिइएको छैन ।,’ उपत्यका भित्रिने र उपत्यकाबाट बाहिरिने हरेक गाडीलाई रोकेर प्रहरीले चेक जाँच गन गरेको एसएसपी ज्ञवालीले बताए । नागढुङ्गा र साँगामा प्रहरीले सवारी पास नभएका दुई पांग्रे तथा चार पांग्रे गाडीलाई जताबाट आएका हुन् उतै फर्काइदिएका छन् ।
‘एम्बुलेन्समा आएका सामान्य बिरामी र सुतेर आउने मानिसलाई पनि फर्काउन निर्देशन दिएको छु,’ उनले भने, ‘बाहिरी जिल्लाबाट छोराछोरीको अनलाइन कक्षा सुरु भयो भनेर आएका अभिभावकलाई पनि फर्काएका छौं ।’ उपत्यकामा पसल व्यवसायको बहाना बनाएर काठमाडौं छिर्नेहरूको संख्या बढ्दो रहेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाका इन्सपेक्टर हेमन्त विक्रम थापाले बताए । उनले भने, ‘बिना पास टाढाबाट आएपनि फर्काइदिने गरेका छौं ।’
नागढुङ्गाका इन्सपेक्टर थापाका अनुसार बिहीबार बिनापास उपत्यका छिर्न खोज्ने एक सय बढीलाई बिहीबार फिर्ता गरिएको छ । उनले भने, ‘करिब एक हजारभन्दा बढी पास देखाई उपत्यका प्रवेश गरेका छन् । त्यस्तैको हाराहारीमा बाहिरिएको छ ।’ सबै भन्दा बढी तराईका जिल्लाबाट खाद्यान्नको गाडी आउने गरेको थापाले बताए । निर्माण सामग्री तथा दुधका गाडीहरू निर्वाध रुपमा आइरहेको उनले जानकारी दिए । प्रहरीले बिनापास टाढाबाट आएपनि फर्काउने भएकाले पास जारी गरेर मात्रै उपत्यका प्रवेश गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
लक डाउन खुकुलो भएको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको लर्को लागेपछि प्रहरीले नाकाका भित्रि सडकहरुमा पनि सुरक्षा व्यवस्था कडाई पारेको एसएसपी ज्ञवाली बताउँछन् । अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन, खाद्यान्न, एम्बुलेन्स र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्या लयबाट अनुमति लिएका बाहेक अन्य सवारी साधनहरूलाई काठमाडौँ प्रवेशमा रोक लगाइएको काठमाडौँका सिडिओ जनकराज दाहाल बताउँछन् ।
‘सरकारले तोकेकाभन्दा अन्य व्यक्तिलाई हामीले नाकाबाटै फर्काइदिने गरेका छौं,’ सिडिओ दाहालले भने, ‘उपत्यकामा आम सर्वसाधारणको गतिविधि र आवत जावत बढेको छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका भित्र पसलहरू बिस्तारै खुलिरहेका छन् भने सडकमा यातायातका साधन पनि बाक्लिन थालेका छन् ।’
यसरी तानिए शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ विवादमा, राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन
June 29, 2021 N20
मध्यरातमा एक भयो एमालेः माधव नेपाल बने नायक, यसरी भएको रहेछ सहमती
July 12, 2021 N20